“Jürgen Klopp wuxuu bad baadiyay mustaqbalkeyga kooxda Liverpool” – Roberto Firmino – Gool FM
“Jürgen Klopp wuxuu bad baadiyay mustaqbalkeyga kooxda Liverpool” – Roberto Firmino
Dajiye November 7, 2018
(Liverpool) 07 Nof 2018. Weeraryahanka kooxda Liverpool Roberto Firmino ayaa qiray in bilawga xirfadiisa Reds ay ahayd mid aad u adag, taasoo ku kaliftay inuu ku fikiro ka dhaqaaqista garoonka Anfield in ka badan hal jeer.
Roberto Firmino ayaa kaga warbixiyay shabakada caalamiga ah ee “goal.com” wuxuu kaga hadlay dhowr arimood ee ku saabsan xirfadiisa kooxda Liverpool.
“Bilawgeyga kooxda Liverpool, runtii waxay ahayd mid aad u adag, xiliga uu ku sugnaa Brendan Rodgers, aniga shaqsi ahaan waxaan u baahnaa waqti igu filan si aan ula qabsado kooxda”.
“Imaatinka Jürgen Klopp ee kooxda Liverpool, ayaa sameesay isbadal weyn, gaar ahaan aniga ahaan waxaan dareemay raaxo badan, waa tababare mar walba jecel inuu shaqeeyo”.
“Jürgen Klopp wuxuu i garanayay kahor inta aanan ku wada kulmin kooxda Liverpool, sababtoo ah waxaan isaga hor imaanay dhowr jeer horyaalka Bundesliga, xiligii aan ka mid ahaa kooxda Hoffenheim, isagana uu tababare ka ahaa Borussia Dortmund”.
Si kastaba Roberto Firmino ayaa Liverpool u soo dhaqaaqay bishii July 2015 isagoo kaga soo biiray kooxda Hoffenheim heshiis ku kacay 40 milyan euro.
Maxaad kala socotaa Labada WAJI ee Luis Suarez!!?????
"Si Ixtiraam darro ah ayuu iila dhaqmay wuxuuna igu yiri wax aan Sheegi karin.".-Neymar